Damian: मूल्य नाम, यसको मूल र भाग्य यसको प्रभाव
हालै, आमाबाबुले अक्सर आफ्नो नवजात शिशु बच्चाहरु असामान्य नाम भनिन्छ। यसरी, तिनीहरूले बाल को व्यक्तित्व, आफ्नो आत्म-विश्वास आफ्नो साथीहरूको तुलनामा ठूलो सफलता हासिल गर्न भविष्यमा यसलाई अनुमति दिन्छ कि बनाउन उत्सुक व्यक्त। साथै, दस केटाहरू बीचमा कक्षा मा धेरै राम्रो गर्दा कम्तिमा यस्तो Damian रूपमा दुर्लभ नामको एक, हुनेछ। बच्चा नाम को अर्थ आफ्नो भाग्य मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। तपाईं सही छनौट अघि त्यसैले, तपाईं के यो सबै एउटै अर्थ बारे एक सानो जान्नु आवश्यक छ।
Damian: मूल्य नाम र अनुवाद
त्यहाँ सम्म Damian को नाम को मूल को दुई संस्करणहरु छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक लागि यसको मूल्य नाम सही कैरेक्टराइजेशन अनुमति दिन्छ।
पहिलो संस्करण अनुसार, Damian नाम ग्रीक जरा छ, र Damianos एक संशोधित रुप हो। यो नाम, बारी मा, रूप अनुवाद जो शब्द "Domaso", आउँछ "रत्तीएको, subdue, विजयी।"
अर्को संस्करण अनुसार, Damian नाम ल्याटिन मूल को छ, र विशेष प्राचीन रोम मा revered छ जो प्रशस्त र प्रजनन Damiey sacraments देवी, संग सम्बन्धित छ। नाम Damiya, बारी मा, जो "महान महिला" मतलब ल्याटिन शब्द "महिला", आउँछ। यो संस्करण अनुसार, Damian को नाम "महान" मतलब सकेन।
Damian संरक्षक को पवित्र नाम
चर्च पात्रोमा सम्म Damian नाम inseparably आफ्नो भाइ cosmas को नाम संग जोडिएको छ। को अर्थोडक्स चर्च सम्मान विभिन्न समयमा बस्ने सन्तहरू को तीन जोडी र विभिन्न ठाउँमा, चिकित्सकहरु थिए र चमत्कारी कार्यहरू प्रदर्शन।
Cosmas र Damian Assiykie एसिया माइनरको जन्म र III-चतुर्थ शताब्दीमा बस्थे। प्रारम्भिक वर्ष मा भाइहरूले Theodotia आमा चिकित्सा विज्ञान प्रशिक्षण तिनीहरूलाई दिनुभयो। साथै, cosmas र Damian एक अद्वितीय उपहार कि बिरामी तिनीहरूलाई निको गर्न अनुमति दिन्छ थियो। आफ्नो काम को लागि, कहिल्यै तिनीहरूले disinterested भनिन्थ्यो जसको लागि एक शुल्क, लिए। दिन सन्तहरू सम्झनामा को - 14 नोभेम्बर।
Cosmas र Damian रोमन को III शताब्दीमा रोम बस्थे। भाइहरूले डाक्टर र चिकित्सकहरु थिए। भइरहेको एक रोमन सम्राट करीना कैद गरिएका, आफ्नो भयानक रोग उहाँलाई निको पार्न, त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। आफ्नो सल्लाहकार द्वारा शहीद, चिकित्सा कौशल cosmas र Damian ईर्ष्या गरे। दिन दूत केटा, को सन्तहरू को सम्मान मा नाम, जुलाई 14 औं पर्छ।
Cosmas र Damian अरब पनि चिकित्सा मा लगे। आफ्नो कार्यहरू जो लागि भाइहरूले hegemonic Lysias द्वारा शहीद थिए sorcery, द्वारा पहिचान गरिएको छ। हामी Diocletian र Maximian को शासनकालमा अरब मा III शताब्दीमा बस्थे। सेन्ट को भोज दिन 30 को हिसाब अक्टोबर।
बच्चालाई Damian लागि नाम को अर्थ
सानो Damian - हँसिलो, चुस्त र हँसिलो बच्चा। यो राय मान्छे को बहुमत गठन तपाईँले पहिला यो हेर्न गर्दा। वास्तवमा, Damian, जसको नाम को मूल्य शब्द "महान" संग, यो प्रकृति स्वार्थी हो सम्बन्धित छ। प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि, आफ्नो व्यवहार स्पष्ट र अत्यधिक narcissism र narcissism देख्न सकिन्छ। र यी सबै गुणहरू यो सफलतापूर्वक सन्तुलित बच्चा को मास्क पछि लुकाउने।
एउटा सानो Damian को वर्ण मा एक नेता को makings स्पष्ट देखेको। स्कूल राम्रो छ, तर उहाँले एक विशेष विषय रुचि, बरु आफ्नै श्रम गर्न एक उच्च स्कोर प्राप्त गर्ने इच्छा बाहिर छ किनभने। Damian राम्रो स्मृति छ, स्कूलमा त उत्कृष्ट अंक राम्ररी योग्य हुन्छ।
बालक Damian लागि नाम को अर्थ उहाँलाई एक जटिल चरित्र एक बच्चाको रूपमा वर्णन गर्दछ। यसलाई पूर्ण यसलाई आफ्नो साथीहरूको साथ विवाद मा सहुलियत बनाउन छैन, लचीलापन गुमाएको छ। यस कारण, Damian मित्र को एक ठूलो संख्या घमण्ड गर्न सक्दैन। तर आफ्नो साहस केटा धन्यवाद कुनै एक कहिल्यै कायता कल गर्न हिम्मत थियो।
तपाईं आफ्नो बच्चा आत्म-विश्वस्त नेता हुर्किसकेका छ, र तपाईं आफ्नो जटिल प्रकृति र मुड मा परिवर्तनहरू आपत्ति छैन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि त्यो नाम उसलाई कल गर्न स्वतन्त्र महसुस।
सुविधा नाम Damian
वयस्क Damian सजिलै एउटा अनुकूल को मास्क, संचार र आत्म-विश्वस्त व्यक्तिमा सुखद पछि आफ्नो नकारात्मक गुण लुकाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, उहाँले अझै पनि एउटै भावनात्मक egoist, एक बच्चाको रूपमा छ। तथापि, Damian छैन वरपरका मानिसहरूले उहाँलाई सम्बन्धित कसरी गर्न indifferent छ। नाम पहनता मानिस, धेरै आफ्नो भावना चोट गर्दा चोट, त्यसैले मानिसहरू सबै भन्दा राम्रो पक्ष देखाउने प्रयास संघर्ष गर्दा।
पहिचान गर्न सकिन्छ र सफल व्यक्ति लागि Damian गरेको महत्त्वपूर्ण। यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न, उहाँले कुनै पनि हालतमा र विधिहरू प्रयोग गर्दछ। यो एक बेईमान मानिस छैन भन्न सकिन्छ।
सामान्य मा, Damian - एक आत्म-विश्वस्त व्यक्ति, बाहिरबाट शान्त र सन्तुलित, अक्सर जीवन सफल।
Damian: सकारात्मक र नकारात्मक गुण
सकारात्मक गुण: समर्पण, steadiness र प्रूडेंस, साहस, अठोट र साहस, उदारता, हास्य को राम्रो अर्थमा।
Damian, जसको नाम को मूल्य - "महान", साँच्चै मान्छे हो। जीवनमा सफलता, उहाँले बरु meanness र कपट भन्दा, आफ्नो ज्ञान खोज्ने
नकारात्मक गुण: प्रूडेंस, स्वार्थ, अत्यधिक व्यर्थ, डाह, ईष्र्या।
Damian व्यस्त मात्र आफ्नो व्यक्ति। अरूलाई, साथीहरू र सह-कार्यकर्ता को सफलता यसलाई अप्रिय छ। तर चापलूसी - यो सिर्फ Damian नाम भनिन्छ मानिसको प्राण लागि yearns कुरा हो। नाम, चरित्र र भाग्य को अर्थ एक जलन मानिसको रूपमा उहाँलाई चिनारी। तर ईर्ष्या Damian लागि - बरु, यो आफैलाई थप कामको लागि एक अवसर हो, यो आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्रोत्साहन छ।
पेशा र क्यारियर को विकल्प
Damian, उद्यमीहरू र रचनात्मक मान्छे धेरै नाम वहन गर्ने मान्छे बीच। यो व्यक्ति को लागि यो पेशामा मा मुख्य कुरा हो - सबैभन्दा ठूलो सम्भव हाइट्स हासिल गर्न, प्रसिद्ध र सफल बन्न। यो लक्ष्य अगाडि जान्छ र प्रतिबन्ध सहनुहुन्न। उहाँले आफ्नो करियर ठूलो सफलता हासिल गर्न उहाँलाई मदत गर्न सक्छ जो धैर्यता र कूटनीतिक acumen, छैन।
प्रेम र परिवार
Damian - रोमान्टिक प्रकृति। यो मानिस को लागि यो निरन्तर प्रेम महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ, उहाँले आफ्नो पारिवारिक जीवन प्राप्त गर्न रोक्छ भने, त्यसपछि क्षणिक सम्बन्ध सुरु थाल्छन्। Damian, जसको नाम प्राचीन ग्रीक मा अर्थ "विजेता" को मूल्य, सजिलै महिला हृदय जित्यो। यो मानिस को लागि सम्बन्ध को बिच्छेद उहाँले सजिलै र सुरक्षित स्थान्तरण, समस्या छैन।
अझै सम्म Damian थप Monogamous। उहाँले प्रेम लागि विवाह गर्न रुचि, तर पनि विवाहको अनुपात को गणना पनि वर्तमान छ। Damian कहिल्यै माथिको जीवित यसको मानक तल पत्नी नारी छनोट। उहाँले यो व्यक्ति बिल्कुल कुनै मूल्य दिन गर्दैन एकल सम्बन्ध हुन सक्छ। परिवार जीवन भर डाह Damian नाम मानिसको मन छोड्न छैन। नाम को अर्थ उहाँलाई एक महिला एक्लै उहाँलाई belonged हुन चाहने एक स्वार्थी व्यक्तिको रूपमा वर्णन गर्दछ। पत्नी शान्त र नम्र, एक प्रबल स्वभाव डाह रत्तीएको गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
पहेंलो तुलिप्स को मूल्य र तिनीहरूले कसलाई दिन
Nonna: नाम मान, मूल र गुण को व्याख्या
नाम Zinaida को अर्थ। मूल विशेषताहरु,
वजन मा पानी को षडयन्त्र: को "सही" पानी र खाना पकाउने नियम
के Myron को नाम को मूल्य राख्छ?
जमानत र जमानत को पाठ्यक्रम मा एक हानि
बेल सिलिकन - एक फैशन र व्यावहारिक सहायक
अंग्रेजी स्ट्राइकर हरि केन
आफूलाई एउटा श्रव्य विज्ञ, वा कसरी घर मा otitis मिडिया उपचार गर्न?
तपाईं विवाह गर्न जाने रूपमा?
Thyroglobulin - यो के हो? thyroglobulin को दर के हो?
को "उत्कृष्ट" मा एक कागज लेख्न